Yeyiphi i-Xiaomi mobiles enobuchwephesha be-NFC? | I-Androidsis
I-NFC yitekhnoloji ethe chu ukuzinzisa kwimarike. Zininzi ngakumbi iifowuni ezisebenzisa yona. Ngokukodwa kuba inokusetyenziselwa imisebenzi eyahlukeneyo, iyenza ukuba ibe yinto enomdla kakhulu kwifowuni yakho. Yintoni egqithisile, Itekhnoloji ekhuselekileyo kakhulu.
Olunye losetyenziso oluphambili lwe-NFC kuxa usenza iintlawulo ngefowuni yakho. Ingesona sizathu sokuba le teknoloji idume kakhulu kwintengiso. Zininzi ii-smartphones ezingasivumeliyo ukuba senze iintlawulo zeselfowuni kusetyenziswa iNFC. Iifowuni zeXiaomi.
Uphawu lwaseTshayina luvele njengenye yezona zidumileyo kwintengiso. Ngokukodwa iifowuni zayo ezisemgangathweni ngamaxabiso afikelelekayo. Isicwangciso esiye sabanceda ukuba baphumelele kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. I-brand ikwasebenzisa i-NFC kwezinye zeemodeli zayo.
Ndiyabulela kule teknoloji, ezi modeli zeXiaomi zinokwenza iintlawulo ezihambayo. Ukongeza kokonwabela ezinye izibonelelo zale teknoloji njengokuqonda kunye nezinye izixhobo. Ke yitekhnoloji eyenza ukuba ubomi bomsebenzisi bube lula ngakumbi. Njengoko sikuxelele, zininzi ii-mobiles zeXiaomi ezineNFC. Nguwo uluhlu olupheleleyo Kude kube ngoku:
Inqaku lam 3
Inqaku lam 2
I-Xiaomi Mi 5s / 5s Plus
Kuluhlu kukho ezinye ii-mobiles ezindala, Kodwa ezi fowuni sele ziphelile kwaye azifumananga uhlaziyo kwi-brand ixesha elide. Ke akukho sizathu sokubafaka. Njengokuba ubona, Uluhlu lufutshane ngandlela ithile. Into eyothusayo, kuba zininzi iifowuni zeXiaomi ezinokuthi zisebenzise le teknoloji. Ucinga ntoni ngayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Uluhlu lweenqwelomoya zeXiaomi ezineNFC
Ezona zixhobo zibalaseleyo ze-DJ ze-Android